'Creepshow 2' Fan recreates 'The Raft' Nkebi na Foto dị egwu
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Creepshow 2' Fan recreates 'The Raft' Nkebi na Foto dị egwu
by Trey Hilburn III Nwere ike 3, 2020
edere ya Trey Hilburn III Nwere ike 3, 2020
Ultra ofufe na ọdịnaya kere Uncle Tnuc nke unyi.co.uk, emeela ka anya anyị na-apụta na nke anyị Creepshow 2 okpokoro isi. Na ụtụ maka Creepshow 2 Agbanye 33 afọ, Deede Tnuc were Twitter ịkọrọ a mucho foto obibi o mere a di na nwunye nke afọ tupu.
The 1987 anthology atụmatụ a mmasị ofufe mmasị nke na kpọrọ fun na-eyi egwu Rọf. Ọ na-egosipụta otu ụmụ akwụkwọ kọleji na-aga ekpori ndụ na ọdọ mmiri zoro ezo. Ha na-emenye ụjọ site na nsị na-eri anụ na ọgụ niile maka nlanarị.
Ọ dị ịtụnanya.
Ihe ngosi blu-ray nke Arrow Video na-abanye miri emi n'azụ ime akụkụ ahụ na ụfọdụ nnukwu ajụjụ ọnụ na ihe nkedo ahụ.
Lelee saịtị Uncle Tnuc ma hụ na ịge ntị na ngwakọta "raft rock" ya. Ọ na-egosipụta ndepụta egwu ogologo site na edo edo nke Camaro.
The ukara Creepshow 2 synopsis na-aga dị ka nke a:
Anthology nke abụọ a na-atụ ụjọ na-egosi akụkọ ifo ndị ọzọ dabere na akụkọ Stephen King. Otu ihe omume hụrụ ụlọ ahịa ndị na-ese sịga-na-ese siga na-abịa ndụ iji bọọrọ ọnwụ nke onye nwe ụlọ ahịa (George Kennedy) na nwunye ya (Dorothy Lamour). Uzo ozo bu otu ndi ntorobia nke ndi nzuzu dika ckpọgharịa. Ikpeazụ echichi na-eso otu ọgaranya na callous nwaanyị (Lois Chiles). Ọ kụrụ ụgbọ ala ya na ụgbọ ala ya wee kpebie ịgbapụ ebe ahụ, mana onye ahụ achọkarị ịnwụ.
Lelee oge ịse foto zuru ezu na unyi.co.uk.
anthologyCreepshowFanHorroroge ịse fotoRọfUncle Tnuc
John Lafia 'Nwa Egwuregwu' Onye Mmepụta Anwụwo na 63
'Amabughị Ihe 4' Bụ 'Ọchịchịrị' na 'kacha njọ' Season Dị ka Joe Keery